तीन महिनामै नतिजा देखिने गरी काम गर्छुः सिईयो युवराज भुसाल – Everest Dainik
तीन महिनामै नतिजा देखिने गरी काम गर्छुः सिईयो युवराज भुसाल
'राजनीतिभन्दा माथि उठेर सवैलाई समेटर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता'
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको तीन वर्षको अवधिमा सोमवार तेस्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिईयो नियुक्त भएका छन । मन्त्रिपरिषदकोको बैठकले गोविन्दराज पोखरेलको राजिनामा स्वीकृत गरी पूर्वसचिव युवराज भुसाललाई बाँकी अवधिको लागि कार्यकारी नियुक्त गरेको हो । भूकम्पपीडितको आँसुमा नेताहरुले राजनीति गरेको आरोप लागिरहेका बेला पोखरेल नै राजनीतिमा उत्रिएर त्यसलाई पुष्टि गरिदिए । पुनर्निर्माण अलपत्र पारेर हिंडेको भन्दै पोखरेलको आलोचना भइरहेका बेला भूषालका सामु पनि निकै चुनौति छन । यसै सन्दर्भमा वैकुण्ठ ढकालले नवनियुक्त सिइयो भुसालसँग लिएको अन्तरवार्ता-
महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा नियुक्त हुनुभएको छ, पुननिर्माणलाई गति दिने तपाँईका योजना के के छन ?
हिजो मात्रै पत्र प्राप्त भयो । आजदेखि हाजिर हुन्छु । अब अहिले कुन स्टेजमा कामको गति पुगेको छ । बाहिरबाट हेर्दाखेरी झिना गतिमा अलि ढिलो ढिलो भएजस्तो लागीराखेको छ मलाई पनि । बिभिन्न कारणले होला अब यसलाई तिव्रता दिएर हाम्रा दाजुभाई दिदिवहिनिहरु खुला आकासमुनी अथवा शहरमा झुप्रामा बसिराख्नुभएको उहाँहरुको आँखा पुछ्ने काममा म लाग्ने छु । यसमा सरकारले मलाई नियुक्त गर्यो म आभारी पनि छु । मलाई के लाग्छ भने सरकारले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसंगै यस्तो खालको नेतृत्व परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने हिसावले होला जस्तो लाग्छ यो हामी निजामतीतर्फ काम गरेका ननपोलिटिकल मान्छेलाई नियुक्त गरेको ।
पहिलेका साथीहरु अलिकति राजनीतिक पृष्ठभुमीबाट आउनुभएकाले सरोकारपक्षहरुले पनि हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो होला तर म प्रति हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तो नहोला भन्ने मलाई लाग्छ ।
मैले ३ दशक भन्दा भन्दा बढी नेपाल सरकारको जिल्ला देखि केन्द्रसम्मका जिम्मेवार पदहरुमा बसेर काम गरेँ । फेरी नयाँ नियुक्ति पाएको छु अब तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन सक्छ, मध्यकाल र दिर्घकलका कामहरुमा म आजैदेखि लाग्छु । तत्कालै म यो गर्छु उ गर्नु भनेर आश्वासन बाँड्ने पक्षमा म छैन् । तर माघ २ गतेको भुकम्प दिवससम्म करिव दुई महिना चानचुन रह्यो त्यसबेलासम्म म केहि गरेर देखाउँछु ।
सम्बन्धित् समाचार एमालेको अहम : माओवादीले ५०–५० भनेसम्म पार्टी एकता हुँदैन
तपाँईको कर्मचारी क्षेत्रमा ३७ बर्षे यात्रा छ, यसले गर्दा तपाँई थाक्नुभयो कि झन बढी उर्जाशिल हुनुभाछ की ! के अपेक्षा गर्ने ?
म थाकेको छैन् । अहिलेसम्म मैले कुनै औषधी सेवन गरेको छैन । मेरो ब्लडप्रेसर, सुगर जस्ता सबै ठिक छन् । तीन बर्ष भयो म रिटायर भएको तैपनि म कलेजमा पढाईरहेको हुँ । अन्य फुटकर कामहरु गरिराथेँ । म अझै २० बर्ष काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ । म जनताको नजिक भएर काम गर्न ईच्छुक छु । अब यो महत्वपुर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । मैले नै आफैँ गर्ने भन्दा पनि टिममा काम गर्ने हो । एउटा व्यवस्थापकिय नेतृत्वदायी भुमीका निश्चित गर्छु र संयोजनकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सबै सरोकारपक्षहरु राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय स्थानीयहरुसबैलाई समेटेर लैजान्छु । राजनीतिक हिसावले पनि म कसैसंग आवद्ध व्यक्ति होईन । सरकारले व्यवसायिक क्षमतालाई नै पहिचान गरेर मलाई नियुक्त गरेको ठानेको छु । त्यसो भएको हुनाले मलाई केहि समस्या पर्ला जस्तो लाग्दैन जतिजा निकाल्नेगरि काम गर्नेछु ।
तीन बर्षमा तेस्रो सिइओ नियुक्त हुनुभएको छ । अघिल्ला सिइओहरुले कर्मचारी संयन्त्रले काम गर्न सकेन र पुर्ननिमार्ण ढिला भयो भनेर भन्थे । समस्या तिनै हुन कि असक्षमता ?
विभिन्न कारणहरु छन् कतिपय कुरा यहाँ भन्न मिल्छ कतिपय मिल्दैन । कर्मचारी संयन्त्रलाई कुन तहको कर्मचारीलाई कहाँ कसरी काम दिनुपर्छ, कस्तो खालको मोटिभेसन उहाँहरुलाई चाहिन्छ भन्ने मलाई थाहा छ । मेरो पृष्ठभुमी हेर्नु भो भने पनि थाहा हुन्छ । मैले काम लगाएका कर्मचारी र मलाई काम लगाएका हाकीमहरु जसले मलाई काम लागाउनुभयो उहाँहरुसंग बुझ्नुभयो भने मेरो क्षेमता थाहा हुन्छ । र सबै राजनीतिक दलहरुको पनि विश्वास जितेर समदुरीमा काम गर्नेछु । सफलता पक्कैपनि हासिल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
पुननिर्माणको गति ढिलै भएको भन्नुभयो, तपाँईको कार्यकालले ढिलाई भएको र ५ बर्षभित्र सबैकिसिमका पुननिर्माण गरिसक्ने भनिएकाे थियाे त्यो लक्ष्य हासिल हुन्छ ?
मलाई हुनुपर्छ भन्ने विश्वास छ । मलाई बाँकी अवधी भनेका छन् । बाँकी अवधी भन्या ३ बर्ष चानचुन हो । सबै निमिट्यान्न, जिरो र फरफारक नै गर्छु त म भन्दिन तर अधिकांस कामहरु हामी सम्पन्न गछौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।
नियुक्तिको प्रक्रिया राजनीतिक हुनसक्छ । तर व्यक्ति चाँही म राजनीतिक नभएको हुनाले व्यवसायिक व्यक्ति हुनाले सरकारले यसरी छनौट गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
अबको तीनबर्षको बीचमा छानो पाउँछन् भुकम्प प्रभावितहरुले भनेर ढुक्क भए भयो‍‍‍…
भुकम्पप्रभावितहरुलाई राहत पक्का मिल्छ भनेर ढुक्क भए हुन्छ । कानुनी, प्रक्रियागत वा व्यवहारीक समस्या रहेछन् भने फुकाउने प्रयास गर्छु । र त्यस किसिमको वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई विस्वास छ ।
सम्बन्धित् समाचार कैलाली अब वामपन्थीको लाल किल्ला हो, म भारी मतले जित्छु: लेखराज भट्ट
प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गर्ने संस्थामा पनि यत्ति ढिलो हुने, नितिगत निर्णयमा समस्या हुने भनेपछि त अन्यत्रको अवस्था कहालीलाग्दो रैछ हैन ?
प्रधानमन्त्री नेतृत्वदायी भुमीकामा हुनुहुन्छ । तर काम गर्ने त तलको संयन्त्रले हो । त्यो संयन्त्रको नेतृत्व तलबाट हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रहेर समन्वयमा रहेर, राजनीतिक दलका सरोकारपक्षहरु पनि हुनुहुन्छ म उहाँहरु सबैलाई साथमा लिएर काम गर्छु भन्ने पुर्ण विश्वास छ ।
राजनीतिक नियुक्ति हो तपाँईले म गैरराजनीतिक व्यक्ति हो भनेर भनिरहँदा चुनावबाट आउने नयाँ सरकारले पनि निरन्तरता देला भनेर विश्वास भएर सहमत हुनु भएको हो जिम्मेवारी लिन ?
यसअघिका सिइओहरुले पनि मिठो बोल्थे र शब्दले खुसी बनाएथे तर व्यवहारमा त्यो देखिएन,
अब तपाँईलाई कसरी पत्याउने ?
अहिले नै पत्याउनुस नपत्याउनुस त्यो तपाँईले हो, पछि त्यो नतिजा हेरेर गर्नुहोला । पहिलेका साथीहरु अलिकति राजनीतिक पृष्ठभुमीबाट आउनुभएकाले सरोकारपक्षहरुले पनि हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो होला तर म प्रति हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तो नहोला भन्ने मलाई लाग्छ ।
ट्याग्स: raghunath bajagain, Yubraj Bhusal